Iqonga le-Thierry Baudet leDemokhrasi (FvD) "Isiqwenga seMinerva sisasazeka amaphiko alo": UMartin Vrijland
Ekuqalisweni kwentetho yakhe yokunqoba ukususela ngobusuku bokugqibela, uTeerry Baudet wathi ebusuku ebusuku:Isiqhwenga seMinerva sisasaza amaphiko ayo ebusuku". Intetho yebhomu yasetyenziswa kakhulu okwangoku ingqalelo kunye nokugxeka, kodwa bambalwa abantu babona iphantsi kabini kule ntetho ngokufanelekileyo. Intsingiselo yentsingiselo yesohlwayo seMinerva ekhankanywe yiBaudet yiyo: i-owl ekhutshwa yi-Freemasons; Moloki. Iimvumi (iinguvu namathambo, uluntu lwaseThle, njl.).
Umdlalo we-Hegelian dialectics uvela phambi kwamehlo akho. Umyalezo ofihliweyo kukuba iqela leLeiden Minerva lilawulwa. UBaudet, inzala yebukumkani Isikolo seClingendael, ibonisa ukuba yinyani yayo imfihlelo efihliweyo. Oogqirha beClingendael baye babeka i-pawn ephikisayo yokulawulwa kwintando yesininzi apho inkcaso inokukhupha i-field-right right field ukuya kwiindawo eziphakamileyo. (funda ngakumbi phantsi kwevidiyo)
UTyerry Baudet unokuthi yonke into ekuhlaziyiweyo kwedatha ibonise ukuba kukho ubomi phakathi kwabantu. Unokukukhuthaza, kuba kunyanzelekileyo kwiYurophu nakulo lonke elaseNtshona limele likhule. Yona ifom ye-Hegelian impumelelo kwi-optima form. I-dialectic yezinto ezimbini ezichaseneyo ezivelisa ngoku: ukuphikisana kukukhokelela kwi-synthesis oyifunayo, nangona ifilosofi uHegel. Yingakho uBaudet angabiza uMark Rutte ubuqhetseba kwezoqoqosho:
"Sigxininiswe yiiyunivesithi, intatheli, abantu abafumana izibonelelo zethu zobugcisa kunye nabazakhele izakhiwo zethu, kwaye ngaphezu kwazo zonke sizithotyelwa ngabalawuli bethu. Ikhonkco yee-networkers eziwileyo; ntla nganiso; abantu abangakaze bafunde incwadi ebomini babo kwaye abazi ukuba zeziphi izinto ezibalulekileyo ezikude. Ngelishwa, zilawula izigqeba ezenza izigqibo zelizwe lethu kwaye zenza izigqibo ezingalunganga ngokuphindaphindiweyo ngokudibanisa okungaziwayo kunye nomdla wokuzimela. "
Kungekudala! Kwaye ke kwaqhubeka, kwaye ke abantu bafumana ukukholelwa ukuba ikampu elungileyo liza kuphumelela kwaye lidale utshintsho olukhulu.
Siyaqonda ukuphakama kweli lungelo ukusuka kwiYurophu kunye nakwi-US, apho uDonald Trump angafumaneka khona phantsi kwenkampu. Siyayazi ukusuka kwikampu yaseBrexit. Siyazi ukusuka eItali nakwamanye amazwe aseYurophu. Izibonda zebhethri zibekwe kumbane ophezulu. Nangona kunjalo, kukulungelelaniswa kwe-synthesis synthesis, apho ilungelo liya kudibaniswa nentlekele yezoqoqosho nezentlalo elindele iNtshona.
Ukungaphumeleli kwe-Brexit endikude ndiqikelele kwaye ukuwa kwezomnotho waseMerika kuya kufakwa ngokukhawuleza kule (ukuchaswa okulawulwayo) iqela elifanelekileyo elifanelekileyo. Ngoko ke ngoyilo ukuba ilungelo ngoku linokuyinqoba, kuba ligalela ekuhlanjululeni ukufunyanwa kwimihlaba apho i-chaos kunye 'ne-oda elitsha' iya kudalwa. Iqela elichasene nehlabathi kunye ne-anti-EU ye-wing cabal cabal iya kudibaniswa nale ntlekele yezoqoqosho kunye nokuhlaziywa kwexesha elizayo. Iingxabano eziza kubonelela zinika amandla okuphucula amandla esitsha esomeleleyo. Oku kunika amandla okuphuphuma kwamandla (kunye nalapha kuthethwa kwangaphambili) ukuthatha i-EU yiTurkey kunye nokubuyiswa kobukhosi base-Ottoman. Kuya kubakhokelela ekugqibeleni kokugqibela kunye nabacebisi abaziintloko; ngokubiza ngokuba ngabacabango. Njengabo abajongene neengxabano, naluphi na uhlobo lokugxeka luya kuvunyelwa ngokucacileyo kwaye kukho kuphela inyaniso ye-1 kwaye yinyaniso ukuba ingalo eqinile iya kubeka.
U-Thierry unokugxeka ukufuduka kwaye unakho Utrecht uhlasela i-PsyOp ukudlala ngeemeko. Kwaye kwinto yokuba siyabona ubuso boqobo be-Pawn Masonic (Minerva Clingendael inzala) eBaudet. Kwaye njengoko kunjalo kumdlalo wokuchaswa olawulwayo, iimvakalelo ezingezantsi zidlalwa kwaye zikhutshwe. Xa i-voltage isetyenziswe kwizibonda eziphikisayo, i-voltage eyenziwa iphezulu. Sibiza ulondolozo ngoku, kodwa wena umvoti ugcinwe kuphela ekukhohliseni okubizwa ngokuba yintando yeninzi. I-Elitaire Clingendael Minerva i-Pawn Baudet inokubamba kwaye ivuselele iimvakalelo zakutsha phakathi kwabantu. Kwaye xa nje abantu begijima emva komqhubi womntu olandelayo, ibhetri ihlawuliswa ngaphezulu nangaphezulu. Emva koko ukukhutshwa kukulandela; intshukumo ezayo. Kwaye kuvela kwi-chaos i-order entsha kwaye iya kubizwa ngokuthi: "Ungaze uphinde!". Yinkqubo eyenzeka kulo lonke elaseNtshona kwaye oku kunokukunceda uqaphele i-master script. Funda yonke into malunga neskripthi somphathi eli nqaku.
Sifakazela ukulungiswa kweengxabano eYurophu; ukutshatyalaliswa okuzayo kweTurkey (Ordo ab Chao), ukuwa okuzayo kolawulo lwaseMelika kunye (emva koko, kwithuba elide) imfazwe yehlabathi yesithathu yeYerusalem. Okwangoku, nangona kunjalo, inxalenye yabantu ihlala ngokukhawuleza. Ithemba lobuxoki kwi-Baudet pawn. Yisikhathi sokubona ngomdlalo we-Hegelian kwaye uqaphele abadlali bezopolitiko kuba ngubani ngokwenene. Nguwe kuphela ongabhenca. Ngaba uwile ngenxa yokhuseleko lomnatha? Ngaba abo banokukunceda ukuhlaziya iindawo ezichasene noluntu? Uwe ngenxa yokukholelwa kwedemokhrasi; iqhutywa yinkcubeko yasebukhosini iClingendael kunye neMinerva.
Funda kwakhona amazwana angezantsi kweli nqaku
tags: Baudet, Clingendeal, wentando, eziziimbalasane, Forum, FvD, ukuseka, lang, ngaphezulu, Minerva, hayi, uloyiso, intetho yokunqoba, intetho, Thierry, intetho, u, kuba
21 Matshi 2019 kwi-10: 34
Amatshontsho kuphela aqhubeka nokuxhasa inkqubo yangoku ...
... kwaye qhubeka ufihla ngokuxhalabisa phantsi kwamaphiko omama noyise.
21 Matshi 2019 kwi-12: 10
Ndiyakwazi ukuphosakela eMinerva = Moloch, kodwa kunjalo, ngokucacileyo sithetha ngemibutho yoluntu eyimfihlo kunye ne-Minerva isiqwenga sibalulekileyo (njengoko uBaudet uyazi). Kucacile ukuba iBaudet ivela kwi-Minerva neClingendael.
juanperro1979 wabhala wathi:
24 Matshi 2019 kwi-10: 14
I-Owl efihlekile emehlweni
21 Matshi 2019 kwi-12: 27
I-owls kuphela ebona inkomo yile, kwakhona ukugcina kunye nokuthenga kwakho kwansuku zonke.
21 Matshi 2019 kwi-16: 02
Ngokumalunga nokutshintsha kwamehlo kaMnu de Owl:
21 Matshi 2019 kwi-17: 36
I-Sla De Wage khoboka, intle! Ndiyakhumbula ukuba ndifunde eli nqaku ngaphambili kule ndawo ngaphantsi kwegama elingafaniyo.
"Iimpawu kunye nempawu zilawula ihlabathi, kungekhona amagama nemithetho."
21 Matshi 2019 kwi-12: 29
Kwaye nantsi ingcaciso enobangela ukuba kungani ..
21 Matshi 2019 kwi-12: 41
IQonga leNtsholongwane elininzi lokuDemokhrasi ibonisa ukunganeliseki kwabavoti '
..eyo kunye nokungaxhatshazi ngoku kulunge kakuhle
21 Matshi 2019 kwi-12: 35
Akukho nto yokongeza, nditshise ivoti yam.
Ndibeka i-snack eyongezelelweyo kule galelo, uMnu. Vrijland.
21 Matshi 2019 kwi-13: 44
Iibhokhwe ezincinci zibizwa ngokuthi "i-owl chicks"! ngexesha le "mpumlo" i-Holleeder inikezele ngesiphakamiso somgubo kumgwebi! abo banamandla okwenene eNetherlands, ngaba ndiloyiko loo nto?
21 Matshi 2019 kwi-13: 46
Umbhalo o bha liweyo. Eyona nto ndiyicinga ngayo. I-Baudet yi-100% yokuchaswa elawulwayo, mhlawumbi kufuneka afake iflegi kwi-Wilders. Izilwanyana empeleni ziyadlula. I-Baudet yinkampani yomntu onokuthanda ukuba nemisebenzi yeVvd. URutte uye wazuza kakhulu kweso siganeko e-Utrecht, epholile. Unokudibanisa zonke izinto eziluhlaza kubasebenzi baseburhulumenteni, gcwalisa iipokotshi zangasese ... iipokotshi ezilungileyo. Ngekhefu ukuya eNdiya kodwa ngekhadi lesikweletu kunye ne-inshurensi. Akukho namnye amaqela anesininzi kwaye kufuneka 'basebenzisane' kunye ne-anddren. Kwaye ke onke amaqela acacile kumgaqo-nkqubo. Leyo injongo.
I-Freemasonry iphakanyiswa ngokucacileyo emehlweni akho. Hayi kakuhle, amakhoboka awawutholi.
21 Matshi 2019 kwi-15: 16
UMark Twain - "Ukuba ukuvota kwenziwa nantoni na ukuba abayikuvumela ukuba sikwenze."
kwaye yindlela nje ngayo
21 Matshi 2019 kwi-16: 35
... Andifuni ukuzibetha, kodwa kubonisa ukuba kukho ukulungiswa phakathi kokuthiwa yi-Utrecht kunye nokhetho. Konke oko kuqikelelwe ..
Efana nale nxalenye eyenziwe phakathi kwamapolisa kunye nesigqeba saseTurkey ngaphambi kokuba ukhetho lubekwe ... Erdogan thx! 🙂
21 Matshi 2019 kwi-16: 39
Ngombulelo kwi-Freemason Masonry nase-Bilderberger. Indoda ehlezi ngakwesokudla se-Slabdullah nguDe Jong onokuzibiza ngokuba nguSekela likaNdunankulu, kwakhona liqela elincinci kwaye isihlalo somdaniso sisigxile.
21 Matshi 2019 kwi-17: 06
Le yi100% yavumelana phakathi kwe-Netherlands neTurkey. Uluntu oluninzi lukarhulumente luthetha ukuba lujoliswe, lucwangciselwe abaTurkey nabaseDutch abababini bawa kuwo. Imvu ilula ukuba ithinteke. Bafuna nje.
21 Matshi 2019 kwi-19: 31
Abalingani be-NATO kulwaphulo-mthetho, siya kuthi KUCH 😀
21 Matshi 2019 kwi-16: 59
Ewe, isikhumba esingenanto sichaza abantu abasesikweni abasesikweni abasibambe isikhundla. Andiyi kucacisa oku ngcaciso engakumbi.
21 Matshi 2019 kwi-17: 08
..holleeder ayifuni ukuba ndihlekise umntu ofanayo owayebandakanyeka ekuthiwa yi-Heineken ekubanjweni kwaye oko kwakususwe ngokupheleleyo nguPeter OM Regelneef de Vries engxenyeni yakhe engenangqiqo yegama elifanayo kwaye asisayi kubagxotha xa izimvu zibuhlungu Emva koko sidonsa eso sikhumba esikhombini kwibhokisi elidala kunye noBetros obisiweyo.
21 Matshi 2019 kwi-18: 45
Umzuzu okanye isihloko mhlawumbi kodwa uyazi ukuba njani amapolisa afumanisa apho uHeineken nomqhubi wakhe bevalelwe khona?
Oku akuzange kube lula kum. My mystery?
21 Matshi 2019 kwi-17: 53
kwaye nceda ungafaki iimpendulo phantsi kweli nqaku lenkcazo 🙂:
21 Matshi 2019 kwi-20: 31
echanekileyo ewe isifo sikaHegel ....
Isivakalisi esisetyenziswa nguBaudet sibonakala sisicatshulwa kwisifilosofi saseJamani uHegel. Wabhala: "Isiqwenga seMinerva asiqali ukubaleka kwada kwasa." UHegel uthetha ukuba abantu babone okanye baqonde isiganeko xa kuphelile. "
kakuhle uya kuwubona kuphela xa uqaphela umnyango
21 Matshi 2019 kwi-20: 34
Yonke iBaudet ibonisa ukuba yi-pawn kwaye iyazi kakuhle indlela umdlalo udlalwa ngayo.
Ukongeza, i-RTL kufuneka isetyenziswe esi sihloko ukuze ibambe ukukhangela kweGoogle eya kwiwebhusayithi yeMartin Vrijland.
21 Matshi 2019 kwi-21: 21
inyaniso yokuba i-elite ithuluzi le-baudet linomdla wokuthetha eli lungelo kwikhamera phambi kweenkomo zokuvota kunye neendaba ezilawulwayo. Ubonisa izinto ezimbini, okokuqala ukuba uhlanganiswe ngumzimba wesithunzi kunye nesibini ukuba uyaqiniseka ukuba i-70% -80% yezilwanyana kwihlathi lezilwanyana ayiboni ihlathi kwimithi ... kuba ehlabathini Imfama iyiliso emva kokumkani wonke
21 Matshi 2019 kwi-21: 22
Iipecies..nenhlanhla kuya kubakho ukudlala kwakhona ngokubu busuku xa ujabulela ubhiya kunye neepyps
21 Matshi 2019 kwi-22: 32
Ndimele ndiyivume, akayi kuvumela uhlaza lukhule ngokuthe ngqo kuyo
Baudet: "Sitshabalaliswa ngabantu abamele basikhusele"
21 Matshi 2019 kwi-20: 57
Ndiyaqonda ukuba uBaudet uthetha ezimbini zezinto ezimbiweyo ukuba abe ngummemezeli waseMzantsi Afrika, uWiegel noPaul Scheffer. Ayikho indlela yokutshitshisa i-system ye-shockers eyayijonga phezulu. Uyabona ukuba ihlala ilinganiswa.
Ngenathemba kwaye ngokuqinisekileyo wonke umntu ubheka i-npo. Ukulindela intliziyo yethu. Utshintsho? ngokwenene abanako ukwenza. Ukucima nje nge-mayonnaise yekhoboka. Kumele uhlale ujabule. Njengoko ndixhalabile ... ijusi
22 Matshi 2019 kwi-07: 29
Ndicinga ukuba ikhonkco ne-owl yaseMinerva noMoloki lide kakhulu.
Kodwa nangona i-Baudet ekholisa kakhulu, kukho, ngombono wam, isizathu esona sizathu sokuba i-elite idinga iBaudet.
Kwaye kukukhohlisa abantu kwiibalo zokubala.
Abaphakamileyo banjengokuthi abantu baya kubona ukuba ukuvota kungenzi ncamango nantoni na ukuba bebanqatshelwe.
Ngokukhawuleza ukuba abantu bavuke kweli qiniso baze batshabalale 'iivoti', isakhiwo sabo samandla siqala ukuwa.
Ukufumana abantu kwiipolon, abapolitiki kufuneka bajonge oko abantu bafuna ukuva.
Kwaye phakathi koluntu olukhulayo udinga uTerry Beraudet.
Ngokuqinisekileyo, abalingani abafuni ukuba abezopolitiko baveze iimeko zabo zemozulu kwaye bayeke ukufuduka, kodwa kungenzeka (okwethutyana).
UBaudet uthi ufuna ukubuyisela ukuzithemba kwezombusazwe, ngoku uphumelele kakuhle.
Yaye yile nto ibalulekileyo (kubafundi abakhulu).
22 Matshi 2019 kwi-07: 31
IBhunga likaRhulumente lichaze kwingxelo yalo yonyaka ukuba ukuzithemba kwezombusazwe kunye namaqela emveli ezopolitiko ayanqabile kwaye asebenze ayongela intando yesininzi. "
Ndifunde kwinqaku le-Volkskrant evela kwi-2017.
22 Matshi 2019 kwi-09: 28
Injongo kukuba ucofa kwikhonkco phantsi kwegama elithi Moloch uze uze kwividiyo kunye namazwana apho ndichaza ngako.
22 Matshi 2019 kwi-13: 25
Isiqalo se-20 March isiphumo
Cofa kwikhonkco, impikiswano kwiMedia kwi-2018 kwitafile ye-RTLshow
Nazi iincwadana ezimbalwa kodwa ngeNgesi
22 Matshi 2019 kwi-17: 59
@Martin, kufuneka ufunde le ngxelo ye-AD. Ifundwa njengengxelo kwiqaku elibandakanya izimvo
Umfanekiso we-owl njengesafilosofi uye wagcinwa ukususela. Akukho sizathu sokuba uMeneer de Uil kwi-Fabeltjeskrant nguye umlandeli owaziyo.
Oko uHegel - kunye no-Baudet-kwakuthetha: ukuqonda kuphela kuza xa iziphumo zento zicacile. Kubonakala ngathi i-Cruyffian 'uya kubona kuphela xa uqonda'. I-Baudet isetyenziswe, phakathi kwezinye izinto, ukuba 'ukuhlanya kwesimo sezulu', amanyathelo awayekholelwayo axabisa imali eninzi, ngeli xesha emehlweni akhe awanako umphumo omncinci.
Imba ebuhlungu ...
22 Matshi 2019 kwi-18: 18
Eyona nto, ndambona ngobusuku bokugqibela, kodwa ndangekho ixesha lokusebenza kwiwebhusayithi yam.
Bafunda kunye kwaye babona ukuba amashumi amawaka abantu aphelela kwiwebhusayithi yam, ngenxa yokuba baya kukhangela loo ngxelo yiBaudet, ngoko kufuneka banyanise kwimiphumo yeGoogle.
Umdlalo omkhulu odlalwa kwaye bayesaba ngokucacileyo ukuba abantu baya kuvuka. Ndenza kuphela mna kwaye abeendaba banezigidi (ukuba kungabikho izigidigidi) kwaye bane-media media efanelekileyo kwaye banomkhosi wonke weendaba zoluntu kwaye banomnatha wabo ku-Inoffizieller Mitarbeiter kwaye banayo i-AIVD ukuba amanyathelo kwaye uyazi (kwaye ulawula konke) .. njalo njalo!
22 Matshi 2019 kwi-19: 51
I-Media / Macht ibonisa i-Baudet ngokulinganayo okufanayo
I-Media kuphela i-1! ifoto engabonakaliyo kwiMediapark kunye neekhamera eziliwaka zeekhamera kunye neekhamera eziliwaka kwipaki yemidiya efanayo, kuphela isithombe se-1 okanye ezimbini
22 Matshi 2019 kwi-21: 32
U-Pim Fortuyn wabulawa eneminyaka elilishumi elinanye kwi-6 / 5 ye-6: 05 eqhutywe yi-5 bullets, iigoland ze-6 ezafunyanwa kuye kwaye kukho into ethile malunga ne-5 kwi-6 yamapolisa kwindawo leyo.
6 + 5 = 11 kunye ne6 × 5 = 30
Ukongezelela kwabayishumi elinanye sibhekana ngokuphindaphindiweyo # inombolo yenombolo # # extlowfrequenty # # dualism # # Elieven #
oku kuthetha ukuthatha ixesha elide kwaye benze njalo. Isitala esifanayo sisetyenziselwa ukunika abantu (ert) into abayifunayo kabi.
« Abafileyo bokuhlaselwa e-Utrecht bafaka ubungqina bokuthi akunakuba yi-PsyOp?
Umboniso omkhulu malunga noT Thierry Baudet ozayo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.289.109
Caesar Caesar Cachet op I-US iyakuhlawula nini irhafu yemozulu kuzo zonke ezo bhombu baziphosayo?